Home Wararka Maanta Daawo: Beelaha Banaadiriga oo kitaabka u kala furay madaxweyne Xasan Sheekh
Muqdisho (Allbanaadir Media) – Beelaha Banaadiriga ee Muqdisho ayaa maanta kulan duco ah oo qur’aan loogu akhrinayay madaxweynihii hore ahna murashax Xasan Sheekh Maxamuud ku qabtay isla degmadaas.
Kullankaan oo ay kasoo qeybgaleen qeybaha bulshada ayaa 114 Qur’aanka Kariimka ay u akhriyeen Xasan Sheekh Maxamuud, iyagoona u duceeyay, Alle-na ugu baryay inuu ku guuleeyo tartanka doorashada madaxweynenimo ee beri subaxdii loo balansan yahay.
Odayaashii ger cadka iyo dhalinyaradii kasoo qeyb gashay kulankaasi ayaa waxay sheegeen in Xasan Sheekh uu u roonaa dadka iyo dalka, gaar ahaan waxay xuseen in beesha Banaadiriga inuu wax badan u qabtay, abaalna ay ugu hayaan, dhalinyaradii uu shaqaaleysiiyay iyo xilalkii uu siiyay.
Waxay xuseen waxgaradkaasi in beesha Banaadiriga xilalkii safiirnimo oo gaarayay ilaa seddax laga qaaday xilalkii ay hayeen, laguna badalay shaqsiyaad beel ahaan loo xoo xushay.
Ugu danbeyntii qur’aan akhriskaasi alle loogu baryay Xasan Sheekh ayey waxay kusoo gabagabeeyeen duco iyo qasiidooyin, nuxurkoodu yahay guul iyo inuu xilka madaxweyne hanto Xasan Sheekh.
Doorashada madaxweyne oo beri 10 subaxnimo loo madalsan yahay ayaa waxaa la sugayaa natiijada cidda kusoo baxdo, iyadoo murashaxiinta liiska ugu sareeya soo galaya la hadal haayo inay ka mid yihiin madaxweyne Farmaajo, Xasan Sheekh, Shariif Sheekh Axmed iyo Saciid Deni.